Dambudziko Dzvene zvakare reKushanya muJerusarema: Gomo Pamusoro peAl-Aqsa Metal Detectors
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Israel Breaking News » Dambudziko Dzvene zvakare reKushanya muJerusarema: Gomo Pamusoro peAl-Aqsa Metal Detectors
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Israel Breaking News • Palestine Kuputsa Nhau • vanhu • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Pakushanyira Jerusarema, vashanyi vazhinji vane chishuwo chekushanyira Gomo reTemberi uye Dome reRombo. Iyo Tembere Gomo inzvimbo inoera mukati meGuta Rekare revaJuda, vechiKristu uye vechiMuslim. Vese vashanyi vanokwanisa kushanya mukomboni uye Al-Aqsa Mosque, kunze kweDome reDombo.
Kugumburwa nekukonana kwakasiya vanhu vatanhatu vafa kwakasimudza kutya nezuro kwekuwedzera mhirizhonga muIsrael nePalestine apo makakatanwa anowedzera pamusoro pezviyero zvitsva zvekuchengetedza panzvimbo inonzwisisika inoera yeJerusarema.
Musi waChikunguru 19 “Zuva Rehasha” rakaziviswa neMutungamiriri wePalestine Mahmoud Abbas 'Fatah bato, vachipindura kuiswa kwevanocheka simbi pamusuwo weGomo reTemberi reJerusarema - rinozivikanwa nevaMuslim saHaram Al-Sharif - pamusoro payo -Aqsa mosque inowanikwa.
Kuiswako kwakaitwa mushure mekurwiswa kweChishanu chapfuura panzvimbo inoera, umo maArab-Israelis akavhura pfuti, achiuraya mapurisa maviri eIsrael - Hail Stawi, makumi matatu, naKamil Shanan, makore makumi maviri nemaviri, vese maDruze maMuslim - uye vachikuvadza wechitatu . Mushure meizvozvo, Israel yakatorawo nhanho yekukakavara yekuvhara zvachose kupinda kune yakaoma kwemazuva maviri.
VaPalestine vakaramba kuramba kweIsrael kwekuti machenjere esimbi aidiwa mukuona kwemhirizhonga iri kuitika nekushandiswa kwemaoko emoto.
Achitaura neThe Media Line, Jamal Muhaisen, nhengo yeCentral Committee yaFatah, akati kuratidzira kwakarongwa muWest Bank, "danho rekutanga pamatanho akawanda atichatora kana Israel ikasabvisa magedhi emagetsi."
"Inhau yezvematongerwo enyika, kwete yekuchengetedza," akasimbirira. “Israel iri kuyedza kuwedzera kuvepo kwayo panzvimbo inoera uye tichatarisana nayo. Tinopikisa michina kusvika kumagumo, kunyangwe kana tichifanira kuipwanya nemaoko. ” Muhaisen akadaidzira hurumende yeIsrael kuti ichinje nzira pakupera kwemwedzi, kana Fatah anotanga chikamu chinotevera chehurongwa hwayo.
Makakatanwa paakawedzera neChitatu, Meya weJerusarema Nir Barkat akaburitsa gwaro achidzivirira danho rehurumende, iro akarondedzera senzira yakakodzera yekudzivirira kurwiswa kweramangwana: nzvimbo yekurongera nekusangana yemagandanga nemhondi. ... Ndinoti varatidziri vanonanga hasha dzavo kumagandanga akagadzira kudiwa kwe [ma detectors esimbi], kwete mapurisa. ”
Iwo manzwiro akagovaniswa zvakanyanya neruzhinji rwevaIsrael uye vazhinji veparamende; ndiko kuti, padivi penhengo dzeJoint [Arab] Rondedzero, iyo yatora mutsetse wakaomarara panhau iyi, ichiratidza kupesana kwenzanga kwakakweverwa zvakanyanya maererano nemadzinza nechitendero. Kukakavara uku kunowedzera kumatunhu ePalestine - kune nyika yeArabhu neIslam, kazhinji - uko vanoona simbi vanoonekwa sekushora; kupesana neyakareba "status quo" paTemberi yeTemberi, bumbiro remitemo uye kukanganisa kunoumba hwaro hwehukama pakati pevaJuda, maKristu nemaMuslim pamuzinda.
Nekuda kwake, Mutungamiriri wePA, Rami Hamdallah akasheedzera kune vekunze uye nyika dzeArabhu neIslam "kutora mutoro wekumisa matanho ebasa, ayo ari mukupesana nemitemo yese, zvibvumirano nematarenda epasi rose."
"Zviri kuitika," Hamdallah akayambira, "imhirizhonga huru uye chirongwa chine njodzi cheIsrael… icho chichawedzera kusagadzikana muJerusarema nenharaunda, [nekwaniso] yekumutsa hondo yechitendero."
Panguva imwecheteyo, vakuru veWaqf - veMuslim Trust, chitendero-chinotungamira chinzvimbo chinotarisira nzvimbo dzinoyera dzechiIslam muJerusalem pasi pekuchengetedzwa kweJordanian pachiitwa neIsrael - vakaita kuratidzira kwavo muGuta Rekare, vachikurudzira vanamati kurega kushanyira al-Aqsa zvachose. Iyi danho rekupedzisira isarudzo yekuvhara misikiti yese yeJerusarema neChishanu mukuyedza kuunganidza zviuru zvevanamati - nevaratidziri - pamusuwo weGomo reTemberi.
Pakati pevagari vemo vechiMuslim, mafungiro akapamhama ndeaya ekutsamwa: "Kurangwa kwechitendero kuri pamusoro pekufungidzira," Rateb, ane makore makumi matatu nemasere, anogara munharaunda yeWadi al-Joz kumabvazuva kweJerusarema, akataura kuThe Media Line. "Al-Aqsa ndeimwe yenzvimbo dzinoyera kwazvo pasi rose uye maIsrael ari kutsamwisa vanhu nezvavari kuita."
Khadeja, mumwe mugari wekumabvazuva kweJerusarema, anotenda kuti Israeri iri kuyedza kutora nzvimbo iyi: Akaudza The Media Line kuti "Mosque iri kutarisana nekutyorwa kwemazuva ese. Israel yakadzima basa reWaqf, uye kuiswa kwesimbi inoona kunonyadzisa kuvaMuslim.
Anopedzisa achiti, "Imba yedu, uye haupfuuri nekuchengetedzwa usati wapinda mumba."
Mukana wekuwedzera mhirizhonga wakaitwa wakajeka Chipiri, sezvo kurwisana kwakamuka kwechitatu kwehusiku husiku pakati pemazana evaMuslim nemauto eIsrael ekuchengetedza padyo nepakaoma. Sekureva kwemapurisa emunharaunda, zvichitevera minamato yemanheru boka revanamati "rakatanga kukanda matombo nemabhodhoro kumapurisa" akamira muOld City. Mapepanhau ePalestine akataura kuti vakawanda vakakuvadzwa, pamwe chete nevachengeti vaviri vekuIsrael. Zvichakadaro, kutanga kweChitatu, mutungamiriri weMapurisa eDunhu reJerusarema akaraira kuti Gomo reTemberi rapfigwa kune vasiri maMuslim, mushure mekunge boka revashanyi vechiJuda vabviswa kunamatira, kutyora "status quo"
Kunzwisisa, kuomarara, uye kuputika kwemamiriro acho ezvinhu, pamwe nezvazvinoreva pasirese, zvinonzi zvakamanikidza Mambo Saudi Arabia King Salman kuti apindire nekufonera Washington kuti iite semurevereri mukuyedza kugadzirisa dambudziko iri. Mukupindura, Mutungamiriri weIsrael, VaBinyamin Netanyahu vanonzi vakoka vakuru veSaudi kuti vashanyire al-Aqsa kuti vazvionere vega kuti chinzvimbo chinoramba chiripo.
Asi mitsara inoita kunge yakasviba. Panjodzi, makakatanwa ari kufashaira pamusoro, chinoitika chese-zvakare-kujairika; mhedzisiro, sekuratidzira kwenhoroondo yedunhu, zvinogona kutyisa.
Dima Abumaria akabatsira kumushumo uyu